Momba anay - Suzhou Funncycle Intelligent Technology Co., Ltd.
FUNNCYCLE, dia R&D sy orinasa mpanamboatra manokana amin'ny bisikileta elektrika sy scooter mihoatra ny 10 taona. Ireo injenieranay dia miaraka am-pahamendrehana indrindra amin'ny scooter elektrika R&D sy bisikileta elektrika. Ny sasany tamin'izy ireo dia niasa tao Ninebot ary nahomby tamin'ny fampiroboroboana ny XIAOMI 365, Gotrax GXL ary ireo vokatra amidy ambony hafa. Miaraka amin'ny marika manokana antsoina hoe "Borita" sy "Sebic". Ny orinasa dia manaraka ny fitsipiky ny fiasa "ny serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny kalitaon'ny vokatra no avo indrindra", miasa miaraka amin'ireo orinasa maro vatsian'ny Taiwan izay mamokatra faritra sy bisikileta marika malaza, manome ny "faritra bisikileta avo lenta miaraka amin'ny fividianana fividianana tokana" mankany amin'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao.
Ny mpanorina dia manana traikefa 2 5 taona amin'ny indostrian'ny bisikileta, scooter, bisikileta ary bisikileta ary nametraka fifandraisana tsara amin'ireo orinasa 1 5 0, izay antoky ny famatsiana rojo. Hainay tsara ny PLEV (EN17128), eKFV (ABE), UL amin'ny scooter elektrika; EN15194, UL2849 amin'ny bisikileta elektrika; coform ho an'ny tsena rehetra manerantany. Manana trano fitahirizana mihoatra ny 8 0 0 metatra toradroa hitazonana ny habetsahan'ny tahiry ary hanafohezana ny fotoana fandefasana.
Ekena ny OEM sy ny ODM, manampy ny mpanjifa hamolavola, mivelatra, manamarina santionany ary mamokatra baiko maro andiana serivisy, mandray an-tsitrapo ny mpanjifa hitsidika anay, hanangana orinasa mandresy!
Toerana misy ny orinasa: Jiangsu, Sina (Tanibe).
Vokatra lehibe: bisikileta elektrika, bisikileta, faritra bisikileta (pedal / saddle / Grip / Hub / Stem / Handlebar / Seza seza / Rim / Freewheel / frame / front fork / frein frein / Tyre / Chainwheel / Crank / Front Derailleur / Derearleur aoriana / Disc freins / Spoke, sns.), Fitaovana (Basket / Fenders / Mirror / Kiraro / Paompy / Fitaovana / Cycle Computer / Bell / Kickstand, sns).